एनआरएनए महाधिवेशनमा दलीय हस्तक्षेप « Drishti News – Nepalese News Portal
एनआरएनए महाधिवेशनमा दलीय हस्तक्षेप
१७ आश्विन २०७८, आइतबार 12:25 pm
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को महाधिवेशनमा घोषित रुपमै राजनीति हस्तक्षेप भएको छ । एनआरएनएको आसन्न दशौँ महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक समूहलाई विजयी बनाउने भूमिका खेल्न नेपाली कांग्रेसले आठ नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ । कांग्रेसको उक्त निर्णयसँगै एनआरएनएको महाधिवेशनमा खुला दलीय हस्तक्षेप भएको हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विदेशस्थित सबै जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष तथा संयोजकहरुलाई पत्र पठाएका छन् । सो पत्रअनुसार यूरोप क्षेत्रमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, एसिया क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्यद्वय अर्जुननरसिंह केसी र अर्जुन जोशी, अमेरिका क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल र ओसियाना क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै, अफ्रिका, मध्यपूर्व क्षेत्र र जनसम्पर्क समितिमा भने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि कांग्रेसले एनआरएनएको निर्वाचनमा कुल आचार्य नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समूहलाई समर्थन जनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
पार्टीका तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्न केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको पनि कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ । एनआरएनएको दशौं महाधिवेशन यही अक्टोबर २३–२५ मा हुँदै छ । महाधिवेशन अगावै सन् २०२१–२०२३ कार्यकालका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
ओलीको पालामा नियुक्ति पाएका तीन जना एकैपटक बर्खास्त
मोहम्मद जयन्तीमा मुश्लिम समुदायलाई सार्वजनिक दिने सरकारको निर्णय
भित्र्याउँदै गरेकाे धानबालीमा वर्षा क्षति
गुल्मीको डहरे खोलाले जीप बगायो
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षा हुन सक्ने